होटेल / रेस्टुरेन्ट - विवादास्पद 'छाया सेन्टर' उद्घाटनमा ने क पा नेताको साथ !
विवादास्पद ‘छाया सेन्टर’ उद्घाटनमा ने क पा नेताको साथ !
१५ रोपनीको कम्पाउण्ड भित्र उद्घाटनको रमाइलो, बाहिर भयो नाराबाजी काठमाडौं । विवादै-विवादका बिच निर्माण सम्पन्न भएको ‘छाया सेन्टर’ संचालनमा आएको छ । पर्यटकीय हब ठमेलमा निर्माण भएको सो होटल तथा मल गत मंगलबार एक कार्यक्रम गरेर नै औपचारिक सुरुवात भएको छ । सो भवनको उद्घाटन चर्चित नेता एवं सत्तारुढ ने क पाका सांसद योगेश भट्टराई र छाया सेन्टरका अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाँडेले संयुक्त रुपमा गर्न पुगेका थिए । छायाँ सेन्टर उद्घाटनको गौण पाटो पनि छ । उद्घाटनका लागि निम्त्याइएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी सो कार्यक्रममा उपस्थित नै भएनन् ।	थप पढ्नुहोस्
♠ वासुदेव पौडेल ♠ पोखरा । नजिकिँदै गरेको अंग्रेजी नयाँ वर्षका अवसरमा पर्यटकीय नगरी पोखराका होटलहरू बुकिङ हुन थालेको छ । विगत केही वर्षयता पोखरा आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्दै गएका कारण अंग्रेजी नयाँ वर्षले त झन पोखराले पर्यटकीय पहिचान नै बनाइसकेको छ । यसबेला आउने विदेशी पर्यटकका साथै नेपालस्थित विभिन्न कुटनीतिक नियोगमा काम गरिहेका विदेशी कर्मचारी समेतको रोजाइ पोखरा नै पर्ने भएका कारण यो याममा विदेशी पर्यटक पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा पोखरा आउने गरेको पश्चिमाञ्चल होटेल सङ्घका पूर्वअध्यक्ष भरतराज पराजुलीले बताए ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । मोरङको बूढीगङ्गा गाउँपालिका बाँसबारीमा रहेको ‘हाइलाइफ’ चप्पल उद्योगले श्रमिकको श्रम शोषण गरेको पाइएको छ । श्रम कार्यालय विराटनगर र मजदुरको हकहितका लागि कार्यरत चार वटा टे«ड युनियनले आइतबार गरेको अनुगमनमा उद्योगले त्यहाँ कार्यरत श्रमिकलाई श्रम सम्झौताबिना कार्य गराएको पाइएको छ । बूढीगङ्गा–३ मा रहेको उक्त उद्योगमा दुई सय मजदुर कार्यरत रहेकामा वर्षौंदेखि श्रम शोषण गर्दै आएको अनुगमनका क्रममा फेला परेको हो । उद्योगमा अनुगमन टोली आउने सूचना प्राप्त भएपछि उद्योगका व्यवस्थापक कौशल मण्डलले श्रमिकलाई एउटा कोठामा थुनेर राखेको थिए ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । मेचीनगर नगरपालिका–१० को धुलाबारीमा सार्वजनिक हितका लागि छुट्याइएको ५ कट्ठा १८ धुर जग्गामा निजी होटलको निर्माण थालिएको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मेचीनगर कमिटीले आपत्ति जनाएको छ । नेकपा झापा जिल्ला कमिटी सदस्य देवकुमार राईको नेतृत्वमा मङ्गलबार पार्टीको प्रतिनिधिमण्डलले नगरपालिकासमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सो जग्गामा होटलको निर्माण तत्काल रोक्न माग गरेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । सरकारले जापान क्लब इन्टरनेशनलाई मुलुकका तीन स्थानमा पाँच तारे होटल स्थापनाका लागि लगानी स्वीकृत गरेको छ । लगानी बोर्डको हिजोको बैठकले जापानी लगानीकर्तालाई काठमाडौँको थानकोट, भक्तपुर र पोखरामा होटल स्थापनाका लागि लगानी स्वीकृत गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो । कूल रु १३ अर्ब ९० करोड लागतमा ती होटल स्थापना गर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धनलाई सहयोग पु¥याउने गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन बोर्डलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । विभिन्न राजमार्गमा यात्रुले होटेलमा राम्रो खाना खान नपाएको भन्ने गुनासोमा प्रहरी प्रशासनले कार्बाही थाल्ने भएको छ । बिशेष गरी बुटवल, नारायणघाट राजमार्गका होटलमा खाना र नास्ता खाए बाफत बढि मुल्य तिर्नु परेको र खाना नि राम्रो नहुने भन्ने बारे प्रधानमन्त्री कार्यालयको गुनासो व्यस्थापन शाखामा उजुरी तथा गुनासा परेपछि गृहमन्त्रालयले राजमार्ग मातहतका प्रहरी प्रशासनलाई कार्बाही थाल्न तथा अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौँ । पूर्ण शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै सरकारले आगामी साउन १५ गतेदेखि पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल र दरबारमार्ग २४ घण्टा खुलाउने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले पर्यटकको आवतजावत हुने ठमेल र दरबारमार्ग साउन १५ गतेदेखि २४ घण्टा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। यसअघि पनि खुलाउन भनिए तापनि तयारी नपुगेकाले खुलाउन सकिएको थिएन ।जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडाँै महानगरपालिकाले गृह सुधार योजनाअन्तर्गत ठमेल र दरबारमार्ग २४ घण्टा खुलाउन थालिएको हो ।	थप पढ्नुहोस्
२१ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पोखराको पार्क भिलेज वाटर फ्रण्ट रिसोर्ट प्रालिको भवनहरु फेवालात किनारभित्र पर्ने वा नपर्ने जाँचबुझ गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले आज सो रिसोर्टका व्यवसायी कर्ण शाक्यलाई उक्त रिसोर्टको निर्माण गर्दा फेवाताल किनारबाट ६५ मिटरभित्र पर्छ वा पर्दैन भन्ने विषय जाँचबुझ गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएका हो ।	थप पढ्नुहोस्
३० चैत, काठमाडौं । दाङ जिल्लामा सञ्चालन भएका होटलको बिहीबार अनुगमन भएको छ । वास फोरम र घोराही उपमहानगरपालिका–१४ ले गरेको अनुगमनमा अधिकांश होटलमा सरसफाइ नभएको पाइएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा अधिकांश होटलले पकाएर राखेका वस्तु खुल्ला रुपमा राखेको पाइएको वास फोरमका संयोजक गोविन्द खड्काले जानकारी दिए । खुल्ला खाने वस्तुमा झिँगा लागेको पाइएको थियो । “होटलहरुमा चाउमिन, समोसा, पकौडी, नमकिन, मिठाई, मासुसमेत खुल्ला रुपमा राखिएको पाइयो,” संयोजक खड्काले भने । त्यसैगरी कतिपय होटलका शौचालयसमेत फोहर पाइएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ ।	थप पढ्नुहोस्